अदालतमा डिभोर्स भएको भोलिपल्टै श्रीमतीको स्तन काटेको अवस्थामा भेटियो शव, गएकी थिईन श्रीमानलाइ भेट्न (भिडियो सहित) – Sandesh Press
अदालतमा डिभोर्स भएको भोलिपल्टै श्रीमतीको स्तन काटेको अवस्थामा भेटियो शव, गएकी थिईन श्रीमानलाइ भेट्न (भिडियो सहित)
November 16, 2021 222
उनीहरुबीच डिभोर्सको कुरा फाइनल भैसकेका कारण अब ति श्रीमानसंग कुरा नगर, भेट्न पनि नजाउ भनेर साथीले सम्झाएकी थिइन् । तर साथीले श्रीमानलाई भेट्न जान दिन्न भन्ने ठानेर साथीलाई को संग कुरा गरेको हो भन्ने सुनाइनन् । तर राती उनी ९ वजे उनै श्रीमानलाई भेट्न गएकी रहिछन् । भोलीपल्ट महिला मृ त फेला परेकी हुन् । घटना रहस्यमय भएको र घटनास्थलमा पनि दुई जनाबिच संघर्ष भएको देखिएका कारण महिला आफै त्यस्तो निर्णय नगरेको हुनसक्ने साथीको भनाई छ ।काठमाडौ । एक दिन अघि पनि पती पत्नी विच अदालतमा डिभोर्स भएको थियो । तर डिभोर्स भएको भोलीपल्टै महिलाको मृत्यु भयो । उनी झु ण्डि एको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । डिभोर्स भएकै दिन महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानियले उनका पूर्व श्रीमान माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । १४ वर्ष अघि विवाह भएकी एक महिलालाई उहि गाउँका अर्का पुरुषले निकै जो’डब’ल गरेर विवाह गरे । दोस्रो विवाह गरेकी ति महिलाको दोस्रो श्रीमानसंग पनि ७ वर्ष पछि विवाह भयो ।
Prevश्रद्धा आज विवाह बन्धनमा बाँधिँदै
Nextमंगलबारको ब्रत लिनुहुन्छ ? के गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा !!
पल शाह प्रकरणमा नाबालिकाका बाबुले पनि बयान फेर्दै भने : ‘पललाइ दुःख दिएर हामीलाई शान्ति हुँदैन’